Dugsiga Dhexe - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
Koriinka waxbarashada heer sare ahaan
Ardayda dugsiga dhexe ee degmada 196 waxay leeyihiin fursad ay ku sahamiyaan maadooyin jiido kala duwan iyada oo loo marayo manhaj loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha ardayda heerka dhexe. Degmada 196, waxaan leenahay lix dugsi dhexe, oo mid ka mid ah uu yahay dugsiga 'magnet' STEM.
Manhajka aasaasiga ah ee ardayda dugsiga dhexe wuxuu si dhow ula jaan qaadayaa heerarka gobolka waxaana ka mid ah xisaabta, sayniska, cilmiga bulshada, iyo farshaxanka luuqadda Ingiriisida. Ardaydu waxay kaloo wax ku bartaan aagag kala duwan oo xulashooyin ah oo ka baxsan aagagga mawduucyada muhiimka ah, kuwaas oo sidoo kale la jaanqaadaya heerarka gobolka iyo qaranka.
Dhammaan manhajka waxaa dib loogu eegay si joogto ah iyada oo loo marayo geedisocodka dibu-eegista manhajka degmada oo dhan. Waxaa naga go'an inaan siinno ardayda dugsiga dhexe taageerada ay u baahan yihiin si ay u arkaan fursadaha aan dhammaadka lahayn ee iyaga ku sugaya dugsiga sare iyo wixii ka dambeeya.
EED KHARIIDADDA XAADIRISKAKA DUGSIGA DHEXE
Liiska Dugsiyada Dhexe